မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: Bridal Shop Checklist: မင်္ဂလာဆောင်ဆိုင် စုံစမ်းရင် မေးဖို့
Bridal Shop Checklist: မင်္ဂလာဆောင်ဆိုင် စုံစမ်းရင် မေးဖို့
ခုခေတ်မှာ မင်္ဂလာဆောင် စီစဉ်မယ်ဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်နေ့တစ်ခုတည်းအတွက် ခေါင်းစားရတဲ့ သတို့သမီးက ရှားပါးနေပါပြီ။ တော်တော်များများကတော့ Bridal shop နဲ့ Pre-wedding photography service ကို ယူလာကြပြီလေ။ ဒီတော့ အဲ့ဒိဆိုင်တွေ အများကြီးထဲက ဘယ်ဆိုင်ကို ကိုယ်ရွေးရမလဲ? ဘယ်လိုရွေးရမလဲ? ဆိုတာ အရေးပါလာပြီ။ လူတွေက တစ်သက်မှာ တစ်ခါဘဝအချိုးအကွေ့မို့ အားလုံး အမှတ်ရချင်ကြ၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ကြတာပဲလေ။ အနည်းဆုံး ကိုယ်စုံစမ်းရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ဆီက ကိုယ်မျှော်လင့်သလောက်တော့ အနည်းနဲ့အများ သိပ်မကွာပဲ ရသင့်တယ်လေ။ အဲ့လို မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် ကိုက်ဖို့က ကိုယ်က စေ့စေ့ပေါက်ပေါက်မေးနိုင်မှ။ ကိုယ်မေးဖို့မေ့သွားတာနဲ့ အသေးအဖွဲကအစ စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်မိရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ မပျော်ရပဲ အဓိပ္ပါယ်မရှိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အဓိကက ကိုယ်ရဲ့ အပျော်ဆုံးအချိန်၊ အလှဆုံးအချိန် စတာတွေကို မှတ်တမ်းတင်ချင်တာ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်အတွက် မှတ်တမ်းတင်တာ အဓိကမကျဘူးဆိုလဲ ဘာမှ မလုပ်လဲ ကိစ္စမရှိဘူး။ အဓိက က ကိုယ်ဘာကို လိုချင်တာလဲ သေချာသိ။ ကိုယ်ဘာကို လိုချင်တာလဲ သေချာမသိရင် လိုက်မေး။ ဆိုင်သမားတွေကိုမေး။ အင်တာနက်မှာရှာကြည့်။ အဲ့ဒိကနေမှ တွေ့လာလိမ့်မယ်။
မဗေဒါအတွက် အတော်လေး ခေါင်းစားဆုံး လုပ်ခဲ့ရတာကတော့ Bridal shop ရွေးတာပါပဲ။ ကိုယ်က ကိုယ်ဆောင်ချင်တဲ့ ဟိုတယ်ကို Fixed ထားပြီးပြီဆိုတော့ ခေါင်းစားစရာ သိပ်မရှိဘူးလေ။ Bridal shop တွေရွေးတဲ့အခါ ပိုက်ဆံဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ မကြည့်ရဘူး။ သူတို့ခေါ်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူတို့ပြန်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတန်လား၊ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်လား စသည်ဖြင့် ချိန်ဆရတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ဈေးပေါပေါယူရင် တစ်ဘဝလုံးစာ ဘယ်သူ့မှ ထုတ်မပြချင်လောက်တဲ့ ဈေးပေါပေါ Quality ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ကြေကွဲနေရမယ်။ အဲ… ဒါပေမဲ့ ဈေးကြီးတာပဲ ကောင်းမှာပါဆိုပြီးတော့လဲ မတွေးနဲ့။ ဈေးကြီးတိုင်းလဲ ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်။ အဲ့တော့ ချိန်ဆပေါ့။
အဲ့လိုချိန်ဆတတ်ဖို့ လိုအပ်မဲ့ စံနှုန်းတွေကို ဒီပိုစ့်မှာ ရေးပေးမယ်။ ဘာတွေကို မေးပြီး ယှဉ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့။
မှတ်ချက်။ ။ အောက်က အချက်အားလုံးက စဉ်းစားရသမျှ ထည့်ရေးထားတာပေါ့။ ဇယားထဲက အကုန် အစုံစေ့တော့ စာဖတ်သူ သတို့သမီးလောင်းညီမတွေ လိုချင်မှ လိုမယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်မလိုတာကို မေးစရာမလိုဘူးပေါ့။ မလိုတာလေးတွေကို ကိုယ်လိုတာလေးတွေနဲ့ အစားထိုး လဲပေးဖို့ ပြောကြည့်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီး ဒီမေးခွန်းတွေက စင်္ကာပူက ဆိုင်တွေကို အခြေခံထားတော့ မြန်မာပြည်က ဆိုင်တွေနဲ့ နည်းနည်းလေးကွဲမယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံတွေကတော့ အားလုံးတူတူပါပဲ။ စင်္ကာပူကဆိုင်တွေမှာ အောက်က မေးခွန်းတွေ မေးပြီး ဈေးဆစ်ရင်တော့ စိတ်မဆိုးတတ်ကြပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာတော့ မသိဘူး (Service တွေက ခပ်ကောင်းကောင်းဆိုတော့ အဲ့လောက်မေးရင် ကိုယ့်ကို ပြောချင်သလို မပြောချင်သလို၊ တကယ်မှ ဝယ်နိုင်လို့လားဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ကြည့်မခံရဘူးဆို အဲ့ဆိုင်တော်တော် ကောင်းနေပြီ)။ စင်္ကာပူက သတို့သမီးလောင်းတွေကို ပြောချင်တာက Wedding show တွေမှာသွားဝယ်ရင် တော့ ဈေးဆစ်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်။ အပြိုင်အဆိုင် တစ်နေရာတည်းမှာရောင်းကြတာဆိုတော့ သူတို့ချင်း ယှဉ်ယှဉ်ပြီးဆစ် ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ဝတ်စုံတွေတော့ အပြင်မှာ ကြည့်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ အစမ်းပြ ဓာတ်ပုံတွေထဲကလောက်ပဲ မြင်ရမယ်။ အဲ့ဒိနေ့ စကားပြော ဈေးဆစ်ပြီး ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ဆိုင် ၂ဆိုင် လောက်ကို နောက်နေ့ သွားလည်ပြီး ဝတ်စုံတွေကြည့်။ (သူတို့ကလဲ Promotion က Wedding show အတွင်းပဲ အကျုံးဝင်တယ် ဘာညာတော့ လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်သွားပြီးဆစ်လဲ ရလောက်မယ်ထင်တာပဲ။ ကိုယ်တော့ မလုပ်ဖူးဘူး)။(မဗေဒါအလှည့်တုန်းက Wedding show မှာဝယ်တော့ တခြားဆိုင်က ဒါပေးတယ်လို့ပြောလိုက်ရင် နောက်တစ်ဆိုင်ကလဲ လိုက်ပေးတော့တာပါပဲ။)။
အဲ နောက်တစ်ခုက အားလုံးမေးပြီး ဈေးစကားပြောရင်း ဟိုဟာလေး ထည့်ပေါင်း ဒီဟာလေးထည့်ပေါင်း။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အားလုံးကို ဒီလောက်ထားပေးမယ်တို့ ဘာတို့ဆိုပြီး overall ပြတာတွေရှိတယ်။ ကိုယ်က စိတ်ထွေပြီး သင်္ချာ အမြန်မတွက်နိုင်ပဲ အဟုတ်သက်သာတယ်ထင်သွားတာမျိုးတွေရှိမယ်။ ဒီတော့ ဖုန်းက ဂဏန်းတွက်စက်ကို အသင့်ဖွင့်ပြီး အားမနာပဲ တွက်ကြည့်။ မဗေဒါတုန်းက ဘာလီမှာသွားရိုက်မယ်ဆို ဒီလောက်လျော့ပေးမယ်ဆိုပြီး တကယ်တမ်း သေချာတွက်ကြည့် အဲ့ဒါလျော့ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်က ထောက်ပြလိုက်တော့မှ သူတွက်တာ မှားသွားလို့ ဖြစ်သွားတယ်။
အောက်က Checklist ကို မရေးခင် စာဖတ်သူ အားလုံးကို ဖြစ်နိုင်ရင် လုပ်စေချင်တာက သူတို့ဆိုင်တွေမှာ ဝတ်စုံတွေကို အရင်ဝတ်ကြည့်ပြီးမှ သဘောကျတဲ့ ဆိုင်ကို ဝယ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ အားနာဖို့ကောင်းပေမဲ့ စင်္ကာပူမှာတော့ တကယ် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဆိုင်ကတော့ လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ မသေချာပါ။ ခွင့်တောင်းကြည့်တာ မမှားပါဘူး။ ဝတ်ကြည့်လို့မရရင်တောင် ဝတ်စုံတွေကို သာမာန် Browse ကြည့်ပေါ့။
စုံစမ်းမေးမြန်းရမဲ့ Checklist ကို အပိုင်း ၅ပိုင်း ခွဲထားတယ်။ သေးသေးပေါက်ပေါက်သေချာခွဲထားလို့ များတယ်ထင်ရပေမဲ့ ကိုယ်ဆိုင်တွေသွားမေးရင် အချက်တော်တော်များများက ပါပြီးသားပါ။
၁။ အခြေခံ အသေးစိတ်မေးရမည့် အချက်များ
၂။ ဓာတ်ပုံရိုက်မည့်နေ့အတွက် ကြိုတင်သေချာအောင် မေးမြန်းရမည့် အချက်များ
၃။ ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်နေ့ ဝတ်စုံအတွက် မေးမြန်းရမည့် အချက်များ
၄။ တကယ့် မင်္ဂလာနေ့ အတွက် မေးမြန်းရမည့်အချက်များ
၅။ တခြား မပြေးသော်ကာရံရှိ မေးမြန်းရမည့်အချက်များ
ဇယားပုံများ သေးနေလျှင် ကလစ်နှိပ်၍ အကြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Give himareward for letting me do everything I want... :D
Labels: Our Wedding , Wedding Tips
တံတားေပၚမွာ လက္တြဲထားတဲ့ပံုေလး သေဘာက်တယ္။ း)
8/17/2015 6:09 PM
@နန္းေရႊမွဳံ - ေက်းဇူးပါ။ လာသြားတဲ့အတြက္ေရာ၊ ကြန္မန္႔အတြက္ေရာ။ :D